Created on Monday, 22 January 2018 15:35
Published on Monday, 22 January 2018 15:35
Quinine Dihydrochloride 0.5g/ ml
Henan Dekang Pharmaceutical Co., Ltd
ဆေးဘူး/ ဆေးကဒ်တွင် ဖော်ပြချက်
(Tetanus Vaccine (Adsorbed) IP)
Dano Vaccines & Biologicals Pvt.
Diclo M Tablets
(Diclofenac Sodium IP 50mg,
Paracetamol IP 300mg,
Magnesium Trisilicate IP 100mg)
VIP Pharmaceuticals Pvt. Ltd, India
Paracetamol IP 325mg)
Suprex Laboratories, India
Oral Suspension IP
[Chloramphenicol 125mg (as
Chloramphenicol Palmitate IP)]/5ml
Cotec Healthcare (P) Ltd, India
(Diclofenac Sodium IP 50mg)
Alco Formulation (India), India
(Neostigmine Methylsulphate IP 0.5mg)/ml
Miracalus Pharma Pvt. Ltd, India
(Lignocaine Hydrochloride IP eq. to
Lignocaine HCl Anhydrous 2%w/v)
Selvok Pharmaceutical Co., Gujarat
Dr-X 100 Tablet
(Sildenafil Citrate IP eq. to Sildenafil 100mg)
Syncom Healthcare Ltd, India
Ridley Lifescience Pvt. Ltd, India
(Dexamethasone Sodium Phosphate IP eq. to Dexamethasone Phosphate 4mg)/ml
Created on Wednesday, 01 November 2017 12:31
Published on Wednesday, 01 November 2017 12:31
၂။ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်တွင်း၌ရောင်းချနေသည့် အလှကုန်ပစ္စည်းများ ကို စစ်ဆေးခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါ အလှကုန်ပစ္စည်း(၄)မျိုးသည် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန ၌ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိသည့်အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော တားမြစ်ဓါတုပစ္စည်း များ ပါဝင်နေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့် အများပြည်သူလူထု သုံးစွဲရန်မသင့်တော်ပါကြောင်း အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
၁။ QIanJinG7Day Special Effect Whitening Speckle Remover Cream တရုတ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ Mercury (+)
၂။ Oriental Whitening Cream (Whitening Anti-Freckle Set) Made in Taiwan Mercury (+)
၃။ WinSurf (ရွက်လှေတံဆိပ်) Makeup Cream Free Way Beauty Co., Ltd., Thailand Mercury (+)
၄။ WinSurf (ရွက်လှေတံဆိပ်) Facial Treatment Lotion Free Way Beauty Co., Ltd., Thailand Hydroquinone (+)
၃။ အဆိပ်သင့်ဓါတုပစ္စည်းများသည် အရေပြားယားယံခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဖြူအနီကွက်များဖြစ်ခြင်း၊ အရေပြားမှတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့စုပ်ယူ၍ ထုံကျင်ခြင်း၊ ကြွက်သားတုန်ခါခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် စိတ်ကျရောဂါများအပြင် ရေရှည်သုံးစွဲပါက ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းနှင့် အခြားရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ ၄။ အလှကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်း၊ ဖြန့်ဖြူး၊ ရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီနှင့် လက်လီလက်ကားဆိုင်များသည် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိသော အများပြည်သူသုံးစွဲရန် မသင့်ကြောင်း ကြေညာထားသည့် အလှကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်း၊ ဖြန့်ဖြူး၊ ရောင်းချခြင်းများကို ကျင့်ဝတ်(Ethic) အရ လုံးဝမပြုလုပ်ရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းက ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၊ အပိုဒ် (၃)(ဃ)အရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး အပ်ပါသည်။
စံမညီဆေးဝါးဖြစ်၍ မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်ခံရသော ဆေး၀ါးများစာရင်း
Created on Friday, 23 June 2017 12:55
Published on Friday, 23 June 2017 12:55
[Amoxicillin 250mg (present as amoxicillin trihydrate USP), Clavulanic Acid 62.5mg, (present as Clavulanate Potassium USP]/ 5ml of reconstituted suspension
Global Pharma Healthcare Pvt. Ltd, India
(Amlodipine Besilate USP eq to Amlodipine 5mg) /uncoated tablet
Paciclox Capsule (Cloxacillin Sodium as Cloxacillin 250 mg)
Korea Pharma Co., Ltd, Korea (Contract Manufacturer)
(Simvastatin USP 20mg)/film coated tablet
Moxin - S Dry Syrup
(Amoxicillin Trihydrate BP eq to Amoxicillin 125mg /5ml of the reconstituted suspension)
Kanflalin 500 Capsule
(Ampicillin Trihydrate eq. to Ampicillin 250mg, Cloxacillin Sodium eq. to Cloxacillin 250mg)
NorthChina Pharmaceutical Co., Ltd, China
Created on Friday, 27 October 2017 14:02
Published on Friday, 27 October 2017 14:02
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းသော အစားအသောက်များကို အများပြည်သူတို့စားသုံးနိုင်ရန်စဉ်ဆက်မပြတ် စိစစ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
စျေးကွက်များတွင် ရောင်းချလျက်ရှိသော အစားအသောက်များကို ဈေးများမှ၀ယ်ယူစစ်ဆေးရာ အောက်ဖော်ပြပါအမှတ်တံဆိပ်များဖြင့်ထုတ်လုပ်သော အစားအသောက်များ၌ ခွင့်မပြုဆိုးဆေးများ၊ မှိုအဆိပ်ပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် စားသုံးရန်မသင့်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
အစားအသောက်ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ဖြူး၊ ရောင်းချသူများသည် အစားအသောက်တွင် သုံးစွဲရန် ခွင့်မပြုသောဆိုးဆေးများကို လုံး၀အသုံးမပြုရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက အမျိုးသား အစားအသောက်ဥပဒေပုဒ်မ၂၈(က)အရ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးအပ်ပါသည်။
Sudan III, Rhodamine B
မှိုအဆိပ်(Aflatoxin B1) သတ်မှတ်ပမာဏထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။
Created on Thursday, 27 April 2017 19:29
Published on Thursday, 27 April 2017 19:29
White Seoul Perfect (24 Stop Acne Cream + Write Face Cream)
Hydroquinone (+) Azelaic Acid (+)
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း သတင်းစာကြေညာချက်ပါ ငရုတ်သီးမှုန့်များ၊ မဆလာမှုန့်များစာရင်း